उच्चतम जनचासो भएको कुरामा गलत हेड्लाइन र खबर राखी बढी सेयर पाउने अपेक्षाका साथ समाचार बनाउने काम प्राय: तीनै च्याउसरि उम्रिएका अनलाइन साइटले गर्छन्, जसको अन्तिम उद्देश्य आफ्नो पेजमा ट्राफिक बढाएर व्यवसायिक उपलब्धि हासिल गर्नु हो तसर्थ हामी प्रयोग कर्ताहरू आँफै सजग रहनुपर्छ कि कुन स्रोतले कस्ता खालका समाचार किन प्रवाह गर्दै आएका छन् ? पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , असार ६, २०७५
जसले जिते पनि बाल मतलब । बेकारको निद्रा हराम अनि स्वास्थ्यमा असर । रेस्टुराँ गएर हेर्दा धनको नाश । आफ्नो काम नगरी हुँदैन । बरु त्यो समय उपयोग गरेर काम गर्दा एक छाक टार्न पुग्छ । पुरा पढ्नुहोस्
रसिया विश्वकपमा सर्वाधिक सस्तो टिकट भनेकै लिग चरणका खेलको पनि क्याटोगरी ३ मा बसेर हेर्ने दर्शकले तिर्नुपर्नेछ । यो क्याटोगरीको टिकट मूल्य १ सय ५ डलर अर्थात् ११ हजार २ सय ३५ रुपैयाँ पर्छ भने सर्वाधिक महँगो टिकट विश्वकप फाइनलको क्याटोगरी १ मा बसेर हेर्दा तिर्नुपर्ने हुन्छ । फाइनलमा क्याटोगरी १ मा बसेर फुटबल हेर्दा दर्शकले १ हजार १ सय डलर अर्थात् १ लाख १७ हजार ७ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । पुरा पढ्नुहोस्
इंग्लिस फुटबल समर्थकका लागि प्रश्न, यसपटकको विश्वकपमा टिमको प्रदर्शन कस्तो हुनेछ ? समर्थकहरू चाहन्छन्– कम्तीमा चार वर्ष अघिको जस्तो प्रदर्शन फेरि देख्न नपाइयोस् । ब्राजिलमा सम्पन्न विश्वकपमा इंग्ल्यान्ड समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो । यसपल्ट भने टिमको उत्साह राम्रो छ । यिनै इंग्लिस खेलाडीको आत्मविश्वास बढोस् भनेर रूस जाने क्रममा उनीहरूलाई फरक किसिमले बिदाइ गरियो । पुरा पढ्नुहोस्
अनोज रोक्का, असार ६, २०७५
विदेशी भूमिमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता अनि समयको साँघुरो परिधीमा मौलाएका सम्बन्ध र त्यसले निम्त्याएको कहालिलाग्दो परिरिस्थती नै ‘वाउण्डलेस लभ’को थिम हो । पुरा पढ्नुहोस्
गायक शिव परियारको स्वरमा नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘मंगली’ बोलको सार्वजनिक गीतको म्यूजिक भिडियो भने विकास सुवेदीले निर्देशन गरेका छन् । भिडियोमा सुशान्त खत्रीले आँचल शर्मासँग जोडी बाँधेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
कतिपय विश्लेषक विश्वकपको फाइनल चरणमा स्थान बनाउन खेलिने छनौट चरणका खेलमा सहभागी टिमहरूले छनौट चरणमै देखाएको प्रदर्शनलाई उनीहरूको विश्वकप जित्ने सम्भावनासँग समेत जोडेर हेर्ने गरेका छन् । छनौट चरणमा सबैभन्दा अगाडि जर्मनी देखियो, जसले छनौट चरणमा खेलेका सबै १० वटा खेल जितेको थियो । पुरा पढ्नुहोस्
अभिनेता राजेश हमालले आफ्नो ५४ औं जन्मदिनको केक काट्ने समारोहमा सोच्दै नसोचेको उपहार प्राप्त गरेका छन् । ५४ पुगेर ५५ वर्षमा प्रवेश गर्ने क्रममा उनले एउटा नयाँ नेपाली चलचित्रबाट प्रस्ताव पाएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
श्रावण ४ गतेबाट अल नेपाल रिलिजको तयारीमा रहेको चलचित्र ‘भैरे’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक ट्रेलरमा प्रेम, रोमान्स, कमेडी र एक्सन प्रस्तुत गरिएको छ । पुरा पढ्नुहोस्